Izinto Eziphezulu Ukwenza Kwintlanganiso YeeNcwadi zeeComic
I-Fanic yoLuhlu oluya kuludweba
Iindibano zeencwadi zeComic ziyinxalenye enkulu yenkcubeko yemifanekiso. Kukho izinto ezinkulu ezenzeka kwiintlanganiso zemibala yamahlaya ezinjengezipapasho, ukukhupha izinto ezifumanekayo kuphela kwi-con, abadumileyo kunye namaqela, nje ukubiza ezimbalwa. Ingqungquthela yencwadi yamahlaziyiyo ingabonakalisa umnyaka wongomntu ukuba uyazi ukuba uza kuphi na ukuba ukhangele ntoni. Khangela ezinye zezinto eziphezulu zokuzibona nokuzenza kwintlanganiso yencwadi yamahlaya.
I-Copyright Eli Loehrke
Esinye sezizathu eziphambili zokuya kwiindibano zeencwadi zee-comic kukubona abadali bakho bebhuku abathandayo. Ababhali, abaculi, iincers, ababalawuli kunye nabaninzi abakwiindibano ezandleni ukuba batyikitye iifomographs, benze imidwebo, baxoxe baze baxoxe ngeencwadi zee-comic. Yindlela enhle yokungena engqondweni yabalimi bakho kwaye ubone oko kubakhonkcoza. Usenokuba nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ufumane umsila kwenye inkunkuma engcolileyo.
Iincwadana zeencwadi zeComic ziba isonka kunye nebhotela yeendibano. Kukho izinto ezithe gqolo ngakumbi kunye neentengiso ezixelwa kwiipaneli zendibano zendibano yamahlaya. Unokufumana inhlebo ehle kakhulu malunga nento ezayo, ngubani oya kuyo, kwaye yiyiphi inqaku elitsha elithatha iincwadi zabo. Umdlali onobuchule uya kuba nokubuza imibuzo emininzi kwaye phantse njalo, umntu uhamba ngeqonga elikhulu leendaba eziza kuphazamiseka emnatha. Yiba ngumqhubi uze ufumane loo nto!
Ukuthenga ibhuku le-comic elisetyenziselwa ukukhanga kakhulu kwiindibano zemibala yamahlaya. Kuyiyona nxalenye enkulu yeendibano kunye nabathengisi abaninzi babuya emva konyaka kunye namahlaya abo. Unokufumana malunga naluphi na uhlobo lwencwadi yamahlaya, ukusuka kwiimvumi eziqhelekileyo zeGold neSiliva, ukuya kumahlaya omtsha, iifrikhi zemifanekiso, manga, kwaye kukho phantse zihlaziye iibhasi zeencwadi ze-comic. Thengisa!
UDan Kitwood / Getty Izithombe Iindaba / Getty Izithombe
Ukugqoka kukuzonwabisa kakhulu, kwaye ingqwalasela ehamba kunye neyona nto ingcono. Ukuba unenqwelo eninzi, amathuba okuba uya kubanjwa ngabantu abakucela ukuba bathathe imifanekiso yabo kunye nawe. Uninzi lweendibano zibambe iqela le-costume, elinamabhaso amakhulu anxulumene nalo. Akukho nto efana nokuxhaswa ngamakhulu amanye amaqhawe amahlaya ngokufumana loo ndleko ezuzayo.
Kukho rhoqo iimveliso ezonwabileyo ezihamba kunye neencwadi zoonwabo. Amanani ama-Action, ama-movie, amathoyizi, izifanekiso kunye nantoni na enokuyicinga ngayo, kunye nezinye izinto ongenazo, ziya kuba kwiindibano zebhuku. Le yindlela enhle yokufumana izinto ezinomntu oyedwa oza kufezeka ngokuqokelela kwakho.
Emva kweeHora iiNkampani
I-Copyright Stuart Gaston
Amaqela abe sisizathu esikhulu sokuba abantu abaninzi baye kwiindibano. Yindlela yokudala abadibanisi kumgangatho onobungane kunye neontanga zabo kwaye yindlela yokuvuthela umqhubi wesuka kwixesha elide lokuhamba. Ezinye zezi ganeko zivulelekile kuluntu, kanti ezinye ziyimfihlo ephezulu. Ngoko phumani niphakamise iinqonga zokufunda malunga neyona ndawo ebanda kakhulu kwi-shindig yasebusuku.
Wonke umntu uthanda ukuba nento engabikho mntu onokuyifumana. Abamemezeli abaninzi, abaqeqeshwayo, kunye nendibano ngokwayo iya kunika izinto onokuzifumana kuphela kwindibano. Mna ndingenza umboniso omncinci wecwecwe, umdlalo wokudlala okanye isicatshulwa sobugcisa. Ezi zivame ukuhamba ngokukhawuleza, ngoko khumbula, "Qala kuqala, sebenza kuqala."
Abashicileli bahlala besenza iindibano ezinkulu zeencwadana zemihla ngemihla, zinezindlu zabo. Ngokuqhelekileyo bafumana abadali abakhulu ukuba benze ukubonakala kwaye behlala benento ethile. Unokufumana kwakhona ii-comics ezivela kubo kwaye ngokuqhelekileyo zithengisa nje kwintlanganiso.
Iindibano zeencwadi zeComic ziphantse zibe neqela elizinikezele ekunikeni i-freebies. Abaqhubi bexesha eliqhelekileyo bahlabela kule tafile ngokukhawuleza xa umnyango uvula. Unokufumana zonke iintlobo zezinto ezinjengeencwadi zoonwabo, amathoyizi, ii-posters, amakhadi kunye nezinye iintlobo zezinto. Ngamanye amaxesha inokuba yinto encinci ye-mobbing, ngoko-ke, lungele uhloniphe, uze ufike kuqala!
Abadumileyo baseHollywood bayaba yinxalenye enkulu kunye enkulu yeendibano zeencwadi zamahlaya. Unokuhlangabezana nabalingisi beklasi kunye nama-actresses avela kumafilimu ozithandayo owezolo, iinkwenkwezi ze-sci-fi kunye nemiboniso ye-TV emnandi, kunye namagama amakhulu namhlanje abonakalayo, asayine i-autographs, kwaye afune imifanekiso. I-San Diego Comic Con International iya kuba yindawo eshushu kakhulu yeefilimu ezinxulumene ne-geek kunye neenkwenkwezi ezinkulu zamagama ziqala ukufumana ukuba ezi ndibano zindlela enkulu yokufumana ilizwi malunga nefilimu zabo.
Inendibano yencwadi yamahlaya izaliswe ngabantu abanjengawe kunye neenjongo zakho ezifanayo. Bonke bathanda iincwadi ezinobomi kunye nezinto ezihamba nayo. Yiba nobungane uze uqiniseke ukuba udibana nomntu onokuba ngumhlobo osisigxina, okanye ubuncinane u-buddy ukuxhuma kunye naye, kuba inendibano yencwadi yamahlaya iyancipha xa unamahlobo okuhamba nawe.
Iimidlalo kuzo zonke iifom ziye zangena kwiindibano zeencwadi ze-comic. Ngokuqhelekileyo unokufumana imidlalo yebhodi , i-table top wargames, imidlalo yokudlala indima, imidlalo yeqhinga, imidlalo yokutshatyalaliswa kwimibala encinane, imidlalo yeakhadi yokuthengwa ... phew! Yimidlalo emininzi! Unokwenza ngokugqithiseleyo nje ukuya kwiindibano ezininzi zee-comic kwaye udlale imidlalo kuphela. Enye into epholileyo malunga nokudlala kukuba idlalwa ngokutsha kwimidlalo. Ungalibali iirhwebo nokuba kunjalo.
I-Dong Son Drums - Iimpawu zoLwandle lweBronze Age Age e-Asia